YAOVA PET Stretch Afuufa Mashiinka wax taaj oo kale soo saareyaasha iyo shirkado - Shiinaha Factory Machine
Sida taxanaheena caadiga ah, waxay sifiican uqabataa oo sanado badan oo horumar iyo horumar ah ay kasbatay qirasho ballaaran macaamiisheenna. Iibka sanadlaha ah ee adduunka ayaa gaadhay boqolaal nooc 2. Moodelkani wuxuu ku habboon yahay dhalooyinka xayawaanka ah ee cabbiro iyo qaabab kala duwan leh 3.Preform-ka si fiican ayaa loo dhexgalay oo si siman ayaa loo helay oo si deggan ayaa loo kululeeyaa laydhadhka 'infrared infrared' 4.Makiinada waxaa wadata dhululubo hawo ah oo la soo dhoofiyo: adkeysi, wasakh la'aan iyo sanqadh yar 5. Qalabaynta sare iyo sirdoonka 6.Qiyaasta sare ee soo kabashada gaaska ayaa loo qaabeyn karaa loona isticmaali karaa dhaqdhaqaaqa cadaadiska hooseeya. 7.HMI oo leh PLC waxay ka dhigaysaa hawlgalka mid fudud oo fudud
Moodelkani wuxuu ku habboon yahay in la afuufo dhalada xayawaanka ee afka dheer, sida daasadda dusha-sare, weel yar ama weyn, iwm 2.Preform-ka si fiican ayaa loo dhex galaa oo si siman oo xasiloon ayaa loo kululeeyaa laydhadhka infrared Optimized. 3.Mashiinka waxaa wata shidaalka hawada laga soo dhoofiyo: cimri dherer, wasakh la'aan iyo buuq hooseeya. 4. otomaatiga sare iyo sirdoonka. 5.Qeybta soo kabashada gaaska cadaadiska sare waa loo qaabeyn karaa loona isticmaali karaa dhaqdhaqaaqa cadaadiska hooseeya. 6.HMI oo leh PLC waxay ka dhigaysaa hawlgalka mid fudud oo fudud
Qaabkani waa mid tamar-badbaadin ah, aad u otomaatig ah oo si fudud loo shaqeyn karo. Noocyada la soo dhoofiyo waxaa loo isticmaalaa mashiinka, oo ay ku jiraan qaybaha hawo-mareenka, saa'idka, qaybaha korantada, iwm. 3.Mashiinka waa hawl-wade, taas oo ka dhigaysa meelaynta preform deg deg deg deg ah oo deggan. Qeybta isku xirnaanta waxaa loogu talagalay inay noqoto mid shaqeysa, keydinta tamarta, xasiloon oo wax ku ool ah, oo aan lahayn buuq. 5.Qeybta soo kabashada gaaska cadaadiska sare waa loo qaabeyn karaa loona isticmaali karaa dhaqdhaqaaqa cadaadiska hooseeya. 6.HMI oo leh PLC waxay ka dhigaysaa hawlgalka mid fudud oo fudud.
Hawlgalka 1.Easy iyo dayactirka habboon. Cilad si dhakhso leh ayaa looga ogaan karaa kumbuyuutarka oo ay u fududahay dadka dayactirka inay tirtiraan. 2.Tamar si wax ku ool ah loo isticmaalo iyo heer sare oo dhammeystiran, iyo tayadiisa waxaa lagu hubiyaa laambad kuleyl la isku halleyn karo oo leh laambado infrared ah iyo qaab sifeysan loo farsameeyay 3. Qaab dhismeedka farsamo waa mid fudud oo boos yar ayaa loo baahan yahay.